‘जबज’मै पिएचडी गरेका बेदुराम नेकपा एसको महासचिव « Himal Post | Online News Revolution
प्रकाशित मिति : २०७८, ७ आश्विन १४:०६
काठमाडौं- माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको महासचिव बेदुराम भुसाल बनेका छन् । लामो समय एमाले स्कुल विभाग हाँकेका नेता भुसाललाई नवगठित नेकपा एएसले पार्टी महासचिव बनाएपछि उनको अहिले चर्चा भैरहेको छ ।
१९ वर्षको उमेरमा ८ कक्षा पढ्दै गर्दा जेल परेका भुसालले जेलबाटै २६ वर्षको उमेरमा एसएलसी पास गरे । साढे १२ वर्ष जेल बस्दा उनले एसएलसीदेखि एमएसम्मको पढाइ पूरा गरे । जेलमा पढाइको व्यवस्था थिएन । आफैँ पढेर उनले एमए उत्तीर्ण गरेका हुन् ।
भुसालले जबजको ऐतिहासिक विकासक्रममा विद्यावारिधि गरेका छन् । संयोग, जनताको बहुदलीय जनवादलाई आत्मसाथ गर्ने भेनेको एकीकृत समाजवादीले जबजको ऐतिहासिक विकासक्रममा विद्यावारिधि गरेका भुसाललाई महासचिव चयन गरेको छ । एमालेको नवौँ महाधिवेशनमा सचिवमा पराजित भुसाल एमाले-माओवादी केन्द्र एकतापछि स्थायी कमिटी सदस्य बनेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका खास सल्लाहकार बनेर चिनिएका भुसाल नयाँ पार्टी गठनलगत्तै राष्ट्रियसभा दलका नेता चयन भएका थिए ।
नेता भुसालले दुई वर्षअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जनताको बहुदलीय जनवादको ऐतिहासिक विकासक्रममा विद्यावारिधि गरेका छन् । मार्क्सवादको विकास कसरी भयो, प्रयोग कसरी गरिएको छ ? नेपालमा कसरी आइपुग्यो ? जनताको बहुदलीय जनवाद के हो ? नेपाली राजनीतिमा यसको कस्तो प्रभाव छ ? भन्नेमा आफ्नो शोध केन्द्रित रहेको उनी बताउँछन् ।